ဆိုဝမ်ဟာ စစ်မှုထမ်းသွားဖို့အတွက်နှုတ်ဆက်ပွဲကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးရင်းနှီး သူတွေနဲ့သာ ကျင်းပခဲ့ပြီး မီဒီယာမှာဖော်ပြတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ဆိုဝမ်ဟာ စစ်မှုထမ်းကာလပြီးရင်တော့ ”A Stranger is Hell” လို့အမည်ရတဲ့ လူကြိုက်များတဲ့ ဝက်ဘ်ကာတွန်းစီးရီးကို လူသရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ ရိုက်ကူးမယ့်စီးရီးတွဲမှာ ပါဝင်ဖို့ စီစဉ်ထားပြီး သူ့နာမည်ရင်းနဲ့ပဲဇာတ်ရုပ်ကိုသရုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၈၈ခုနှစ်မှာမွေးခဲ့တဲ့ ဆိုဝမ်ဟာ အခုအခါ အသက် (၃ဝ) ပြည့်ပြီဖြစ်ပြီး ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်က သူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ” The Attorney ” ရုပ်ရှင်၊ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်ကရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ”Misaeng In Complete Life”ရုပ်ရှင်တွေနဲ့လူသိများထင်ရှားတဲ့ သရုပ် ဆောင်ဖြစ်သလို အဖွဲ့ဝင်ငါးဦးပါဝင်တဲ့ ZE:A ဂီတအဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်လည်း လူသိများပါတယ်။ သူဟာ သရုပ်ဆောင်ဆိုင်ရာ ထူးချွန်ဆုတွေဖြစ်တဲ့ နဂါးပြာဆု၊ Popular Starqk? Bakesang အနုပညာဆုစတဲ့ ဆုတွေရရှိထားသလို အဖွဲ့လိုက်ဂီတအယ်လ်ဘမ်အနေနဲ့ ”Spectaclar”နဲ့ ”First Homme” တို့ကို ထွက်ရှိထားပါတယ်။
ဂျက်စတင်ဘီဘာက မိမိမှာ ကြိုးစား ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ကြောင်း ပရိသတ်တွေကို ရင်ဖွင့်
မြန်မာ – ဂျပန် နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရရန်ပုံငွေ စုစုပေါင်းကျပ် ဘီလီယံ ၁၄ဝ ကျော်ဖြင့် နှလုံး၊ ဦးေ?
ကမ္ဘာ့ ချန်ပီယံပြင်သစ်၏ အိမ်အပြန်ခရီးတွင် ပရိသတ် ငါးသိန်းကျော် ကြိုဆိုခဲ့၊ စံချိန်ချင်း တူ?